Sidee Qareen Xashiishad oo Chicago Kuu Caawini Karta Bilaabida Ganacsi?
Sidee Qareenka Xashiishka ee Chicago kaa caawin karaa Bilaabida Ganacsi Xashiishad
Haddii aad raadinayso a Qareenka cannabis ee Chicago, waxaad timid meesha saxda ah. Maqaalka, waxaan shaaca ka qaadnay dhammaan dhinacyada uu qareenka cannabis Chicago ka hadlayo ganacsiga xashiishadda. Waa muhiim in la ogaado sida loo raaco qawaaniinta iyo sida loogu ilaalin karo milkiile ganacsi ahaan.
wanaagsan A Qareenka cannabis ee Chicago waxay kaa caawin karaan hoos u dhigida halista iyo kordhinta waqtiga hawlgallada ganacsi ee waxtarka leh.
U hogaansanaanta Sharciyada Cannabis ee Illinois
Qareenka cannabis ee Chicago waa qof rasmi ah oo kaa caawin kara u hogaansanaanta sharciyada cannabis ee Illinois. Iibsiga marijuana xilliga firaaqada ah waxay sharci ka noqon doontaa Illinois laga bilaabo Janaayo 1, 2020, waana waqtigan la joogo isbedel weyn oo ku yimaada warshadaha xashiishadda. Isticmaalayaasha Kaarka Aqoonsiga Bukaanka Cannabis ee Caafimaadka ah oo shaqeynaya waxay awood u yeelan karaan inay iibsadaan marijuana caafimaad iyo dhammaan dadka kale ee isticmaala waxaa loo oggolaan doonaa inay iibsadaan marijuana ujeedooyin madadaalo ah.
Ganacsiyada ka diiwaangashan sidii loo kala baxo ayaa leh ikhtiyaar ay ku hubinayaan macluumaadka macaamiisha iyagoo adeegsanaya noocyo gaar ah oo iskaan-goosadyada Cova. Sawirradanas, waayo-aragnimada macaamiisha ayaa aad u fiicnaan doonta iyada oo ay uga mahadcelinayso hannaanka hubinta degdegga ah iyo macaamil ganacsi aan kala go 'lahayn. Xadka iibsigu waa 2.5 wiqiyadood ubax cannabis. Waa suurta gal in la iibsado qaddigan 2.5 wiqiyad 14-kii maalmoodba mar.
Xeer kale oo ku saabsan xeerarka xashiishadda gobolka Illinois waa xaddiga THC ee alaabada-daroogada cannabis ku jirta. Wax ka badan 500 oo milligram oo THC ah looma ogolaan doono badeecadan. Ogeysiiska xadka iibsashada otomaatiga wuxuu u oggolaanayaa tafaariiqlayaasha inay ka hortagaan u hoggaansanaanta bukaanka iyo macaamiisha horay u gaarey xadka iibka. Xaaladdan oo kale, mas'uuliyiinta gobolka Illinois masuuliyiinta gobolka waxay rabaan inay yareeyaan kormeerka iyo ka badinta xad-dhaafka xashiishadda caafimaadka.
Dukaan-iibiyayaasha xashiishadda ee ku nool Illinois waxay rabaan inay u hoggaansanaadaan qawaaniinta, waxayna la socon doonaan tallaabooyinka soo socda:
Bilaabashada iyo soo afjaridda alaabada
Soo iibsashada xashiishadda
Soo sheegida si buuxda ayey otomaatig u tahay maadaama iskaanka Cova uu si buuxda ugu dhexjiro nidaamka xaqiijinta gobolka ee Illinois. Xakameynta alaabada iyo nidaamka nidaamka iibka ayaa ku saleysan webka oo ay dowladdu marin uheysan karto wakhti kasta. Nidaamka Cova wuxuu buuxiyo shuruudaha marka laga hadlayo xakamaynta alaabada taas oo shardi u ah in alaabooyinka laga dhigo gacmaha carruurta yaryar. Isla mar ahaantaana, alaabada ayaa laga ilaaliyaa suuqa madow iyo howlaha sharci darrada ah.
Qandaraasyada iyo Hawlgallada Ganacsiga Xashiishka
Qareenka cannabis ee Chicago ayaa kaa caawin kara inaad farsameyso qandaraasyada ku habboon howlahaaga ganacsi. Heshiisyada saxda ah, waxaad ku qeexi kartaa qawaaniinta iyo waajibaadka dhinac kasta. Si taxaddar leh u leh faahfaahin kasta, Qareenka cannabis ee Chicago ayaa qeexi kara qandaraasyada soo socda:
Mawduucyada Iskaashatada ama Ururka
Heshiiska Maamulka Gudaha
Heshiisyada koox saddexaad
Dhamaan heshiisyadaan waxaa loo sameeyay inay bixiyaan sharci ilaalin xuquuqdaada ganacsiga iyo hantidaada. Dukumenti kastaa wuxuu qeexayaa sida aad ula shaqeyn karto shirkadaada ganacsi inta lagu guda jiro xaalado ganacsi oo gaar ah. U hoggaansanaanta qawaaniinta iyo qawaaniinta Illinois waa shayga ugu muhiimsan nidaamka guud ee heshiiska. Qareenka cannabis ee Chicago ayaa ka dhigi doona heshiisyada mid sahlan in la isticmaalo oo la fahmo si laguugu barto qodobbada ugu muhiimsan ee heshiisyada.
Ka sokow qandaraasyada la xusay, waxaad sidoo kale ubaahan kartaa dukumiintiyada qeexaya ganacsigaaga hab aad u faahfaahsan. Arintan, waxaad u baahan kartaa inaad hesho heshiis shaqo oo aqoonsada xadidaada iyo qawaaniinta shaqaalaha. Dukumiinti kale oo laxiriira ayaa ah heshiiska iibsashada saamiyada kaasoo qeexaya iibinta saamiyada ama qaababka kale ee lahaanshaha shirkadda. Dukumintiga saddexaad wuxuu ku yimaadaa qaab ganacsi ganacsi ah. Dukumintigaani wuxuu qeexayaa qorshaha ganacsi ee xashiishadda kaasoo dhaqan gelinta qaabab badan oo kala duwan u leh. Si aad uhesho dukumiintiyadaan oo dhan, waxaad ubaahan kartaa latalin dheeri ah qareenkaaga xashiishadda Chicago.
Wadashaqeynta Gobolka Illinois oo laxiriirta Arimaha Shatiga Xashiishka
Dhexgalka Gobolka Illinois waa muhiim dhinacyo kala duwan. Dhammaan milkiilayaasha ganacsiga ee raba inay helaan laysan waa inay u hoggaansamaan qawaaniinta rasmiga ah. Noocyada ugu waaweyn ee codsiyada liisanka ayaa u baahan faahfaahin aad u khaas ah. Waxaa laga yaabaa inaad u baahatid inaad siiso macluumaadkaaga shakhsiyeed, hubinta taariikh dambiyeed, qorshe ganacsi oo loogu talagalay ganacsiga xashiishadda gaarka ah, iyo lacagta guud ee khidmadda shatiga gaarka ah.
Xaaladda markii aad rabto inaad hesho liisanka daawada marijuana, waxaad u baahan kartaa inaad bixiso khidmad dhan $ 30,000 taasoo ah khidmad rasmi ah oo ka jirta gobolka Illinois. Haddii aad hesho liisanka lagu kala qaado, waxaad awoodi doontaa inaad ka iibiso badeecadaha xashiishadda dadka waaweyn ee da'doodu tahay 21 iyo wixii ka weyn. Tani waxay suurtagal noqon doontaa laga bilaabo Janaayo 1, 2020.
Codsiyada waxaa loo qaddarin doonaa iyadoo loo eegayo nidaamka dhibcaha qaaska ah, codsadayaashu wey ogaan doonaan haddii la aqbalayo May 1, 2020. Illaa 75 rukhsad shuruudo leh ayaa la bixin doonaa iyo codsadayaasha hela shatiga shuruudaysan waxay haystaan ​​180 maalmood inay ku helaan goob ku habboon iibinta xashiishad. Goobta waa in ay ansixiyaan saraakiisha waaxda.
Hay'adda rasmiga ah ee mas'uul ka ah ruqsad siinta xashiishadda ee Illinois waa Waaxda Dhaqaalaha iyo Xeerarka Shaqaalaha ee loo yaqaan (IDFPR).
Caawinta arrimaha guryaha iyo arrimaha xuduuda
Gudaha Illinois, waxay sharci ahaan noqon doontaa in lagu beero oo lagu iibiyo xashiishadda qaybo ka mid ah gobolka laga bilaabo 2020. Si aad u buuxiso shuruudaha rasmiga ah, waa inaad la tashataa qareenka cannabis Chicago kaasoo soo jeedin doona aagagga laga heli karo ganacsiga xashiishadda iyo sida aad uga dhex shaqeyn karto gudaha xeerarka.
Haddii aad bilaabayso ganacsi xashiishad oo aad rabto inaad iibsato hanti ma guurto ah, waxaa wanaagsan inaad qareenkaaga kala tashatid fursadaha suurtagalka ah ee aad yeelan karto. Bilaabida ganacsiga xashiishadda ee gobolka Illinois way sahlan tahay caawinta qareenka cannabis ee Chicago. Waxaad awoodi doontaa inaad aragto waxa suurta gal ah in laga bilaabo gobolka iyo sida shatiga saxda ah isbedel ugu sameyn karo. Iyada oo leh qorshe wanaagsan iyo qareen xirfadlayaal ah oo reer Chicago ah, waxaad fursad u heli doontaa inaad yeelato ganacsiga ugu waxtarka badan ee cannabis oo leh aragti weyn oo ku saabsan koritaanka gobolka Illinois.